Ungqamanisa njani iiKhalenda zikaGoogle ezi-2 | Martech Zone
NgoLwesithathu, Juni 10, 2020 Lwesine, Okthobha 1, 2020 Douglas Karr
Ngokufunyanwa kwe-arhente yam kwaye ngoku ndisebenza njengeqabane kwinto yam entsha Iqabane lezentengiso, Ndinombandela apho ndibaleka khona ezimbini G Suite akhawunti kwaye ngoku uneekhalenda ezi-2 zokulawula. Iakhawunti yam endala ye-arhente isasebenza ukuba isetyenziselwe upapasho lwam kunye nokuthetha- kwaye iakhawunti entsha yeyayo Highbridge.
Ngelixa ndinokwabelana kwaye ndibona ikhalenda nganye kwenye, ndiyafuna ukubonisa amaxesha asuka kwenye ikhalenda nganye kuxakekile. Ndikhangele naluphi na uhlobo lwesisombululo… kwaye ekuphela kwendlela endinokuyenza ngayo kukumema enye iakhawunti kwisiganeko ngasinye, esibi kwaye singakhokelela kudideko nabaxumi.
Okubaluleke nangakumbi kukuba kufuneka ndicwangcise izicelo zam zekhalenda nganye. Oku kukhokelele ekubeni iintlanganiso ezininzi zicwangciselwe ungquzulwano ekuye kwafuneka ndizicwangcise kwakhona. Kuyakhathaza noko. Ndiyathanda ukuba G Suite unikezele ngesakhono sokubhalisela enye ikhalenda kwaye usilele njenge ndixakekile kwikhalenda yokuqala.
Ukukhangela kwam kukhokelela kwisisombululo esihle, Iikhalenda zeSyncThem. Ngeqonga, ndakwazi ukongeza ukungqinelanisa ezimbini… ukusuka kwiakhawunti nganye ukuya kwenye.
Kutheni uvumelanisa Iikhalenda Zakho?
Kunokubakho iimeko ezininzi zokusebenzisa oku kusebenza. Unokufuna ukubhloka ixesha kwikhalenda yakho yomsebenzi ngokusekwe kwikhalenda yakho yabucala / yobuqu. Unokufuna ukukopa yonke imicimbi kwikhalenda yeqela ukuya kweyakho yobuqu. Okanye mhlawumbi ungumntu osebenza yedwa osebenza nabathengi abahlukeneyo kwaye ufuna ngandlela thile ukulungelelanisa umsebenzi wakho.
Iakhawunti ikuvumela ukuba ubhalise ngekhalenda yokuqala kwaye ungqamene ukuya kwiikhalenda ezi-5. Kulungile, unokwenza iinkcukacha zekhalenda, kubandakanya:
Isikhumbuzo - okungagqibekanga ngu icinyiwe kuba oko kungakhokelela kuzo zombini iikhalenda zikuthumele isikhumbuzi.
umbala -Ndiluncedo ngakumbi, ndinokungena kwikhalenda nganye ichongwe ngombala othile.
Yisicelo sewebhu esincinci kwaye esingabizi kwisivumelwano sonyaka. Ndiqinisekile ukuba izakundisindisa ngaphezulu kweendleko ekuhambeni kwexesha.
Qalisa uvavanyo lwakho lwasimahla lweentsuku ezili-14
Iphepha elichazayo ukuba awusenanto oyifunayo: Ndililungu le Iikhalenda zeSyncThem
tags: G Suiteikhalenda kaGooglegsuitkwenziwa kanjaniimvelisocwangcisaUkuvumelanisaukuvumelanisaIkhalenda